Gabadh Muslim ah oo xijaabkeeda ku wayday abaalmarin - BBC News Somali
Gabadh Muslim ah oo xijaabkeeda ku wayday abaalmarin
Xigashada Sawirka, Facebook/Noor Alexandria Abukaram
Noor waxay xiratay xijaab ay shirkadda Nike u sameysay gabdhaha orodada ka qeybgala.
Gabar da'yar oo Muslim ah oo oroddada Mareykanka ka qeybgasho, ayaa loo sheegay in aysan abaalmarin u qalmin ka dib markii ay dhameysay tartankii ay ka qeybgashay.
Gabadha oo ku Deggan Ohio, waxay sheegtay in ay si wayn uga argagaxday arrintaas oo loo sababeeyay in ay xijaab xirnayd.
Nuur Abukaram, oo 16 sano jir ah, waxa keli ah ee lagu haystay wuxuu ahaa in lebiskeeda uu ka soo horjeedo sharciga. Taasna waxay ogaatay markii ay ka gudubtay diilinta guusha.
Ka dib dhalleeceyn iyo xanaaq badan oo ka dhashay arrintaas, Hay'adda tartamada Orodada ee dugsiyada Sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay eegeyso sidii ay tartanka sannadka dambe u badali lahayd shuruucdeeda diimaha ka hor imaanaya.
Sheekada gabadhan Muslimadda ah waxay dhalisay dood weyn oo illaa heer qaran ah oo la xiriirta lebiska iyo faquuqa.
Noor waxay xilli ciyaareedkan oo dhan, u ordeysay kooxda Iskuulka Sylvania Northview, xijaabkeedana marna ma uusan noqon arrin lagu qabsado, illaa Sabtidii oo tartanka ay uga qeybgashay Findlay.
Ka dib markii qiimeyn lagu sameeyay kooxdeeda, mid ka mid ah saaxiibbadeed ayaa loo sheegay in goonada ay xiran tahay aysan waafaqsaneyn sharciga orodka, ka dibna way iska siibtay, sida ay Noor ku qortay barteeda Facebook.
Laakiin, waxb kama aysan dhihin xijabkii ay ku ordeysay, inkastoo ay sheegtay in ay aragtay tababareheeda oo si gaar ah ula hadlaya saraakiisha.
Ka dib markii ay dhameysay orodka oo ahaa 5km kaas oo ay kaga gudubtay waqtigii ugu yaraa ee ay oroddo, Nuur waxaa la yaab ku noqotay in ka dib ay magaceeda ka weyday liiskii la yeeriyay. Saaxiibbadeeda ay isku kooxda yihiin ayaa u sheegay in xijaabkeeda aawadii ay ugu qalmi wayday abaalmarinta.
"Waxaa dareemay sida in uu gaari xamuul ah uu igu dhacay oo caloosha uu iga dulmaray," ayey tiri Nuur oo la hadashay BBC.
"Sababtu ma ahan in ay ka fakarayaan badqabkeyga, ama in ay ka walwalsan yihiin in aniga xijaabkeyga uu oradka iga caawinaya si ka abdan kuwa kale sababtoo ah aniga wax faa'iido ah kuma qabin xirashada xijaabka oo orodka iga caawiyay."
"Waxay ila tahay in arrintan ay ka soo horjeeddo diinteyda."
Nuur waxay tilmaamtay in ay dareentay "in la ceebeeyay" ka dib markii ay orodka dhameysay, madaama saraakiishii maamuleysay tartanka aysan waxba ka dhihin ka hor intaysan ordin.
"Waxaa la mid noqday sida qof lagu mada daashaday tartankaas, waxaana u orday oo keli ah sarakiishaas," ayey tiri.
Tababareheeda ma uusan gudbin warqadda codsaneysa in diinteeda sida ay qabto ay u lebisato, balse hadda wuxuu warqaddaas u diray saraakiisha maamuleysay orodka soo socda ee heer gobol, waana la aqbalay.
In kastoo xeerka u qoran orodada aan lagu xusin xijaab, haddana waxa lagu xusay dharka diimeed ee madaxa lagu xirto wuxuu u baahan yahay in la dalbado fasax, sida ay warbaahinta gudaha qoreen.
Muran ka dhashay guurka nin Muslim ah iyo gabadh Hinduu ah oo go'aan laga gaaray
#Hay'adda maamusha orodada Iskuullada ee OHSAA waxay BBC u sheegtay in "si gaar ah ay u eegayaan shuruucda la xiriita dharkan si ay wax uga bedesho oo mustaqbalka aysan wax fasax ah u baahan xijaabka iyo maryaha kale ee madaxa lagu xirto".
"Haddii tababaraha ama iskuulka oo horey u sii dalban lahaa fasaxa, waxaan oo dhan ma aysan dhici lahayn. Saraakiisha waxay si fudud u meel marin lahaayeen arrintaas."
Warbixinta waxay intaa ku dartay in hay'adda ay la xiriirtay iskuullada ayna u ballan qaadeen in tababarayaasha la baro dhamaan shuruucda ciyaaraha.
Tartankii orodka ee Sabtidii ee Noor Abukaram ay ka qeybgashay
Nuur Abukaram waxay aaminsan tahay in aan loo baahneyn in la saxiixo warqadda fasaxa xijabka.
Balse waxay sheegtay in falcelin aad u wanaagsan ay ka heshay bulshadeeda iyo dhamman dadka Mareykanka. Farriintii ugu horreysay ee ina adeerkeed uu Facebook dhigay waxaa Like saartay illaa 2,000 oo qof, waxaana asxaabtooda la sii wadaagay illaa 3,000 oo qof.
Khamiistii, Haweeneyda u tartameysa xilka madaxweynaha Mareykanka ee ka tirsan xisbiga Dimuquraadiga, Elizabeth Warren, ayaa farriinta sii taageertay waxayna tiri: "Ardeyda Muslimiinta waa in aan marnaba loo diidin in ay ka qeybgalaan nashaadyada ama howlaha iskuulka.
Muranka ku saabsan tartamada iyo xijaabka ma ahan wax cusub.
Sannadkii la soo dhaafay, gabar 16 sano jir ah oo ciyaarta basketball, kuna nool magaalada Philadelphia, ee gobolka Pennsylvania, ayaa lagu qasbay in ay garoonka ka baxdo ka dib markii ay xijaab xiratay, taas oo sababtay in la badalo shuruucda dalka oo dhan.